Iyo Faira xxx.docx Haigone Kuvhurwa Nekuti Kune Matambudziko Nezviri Mukati
musha Products DataNumen Word Repair Iyo Faira xxxx.docx Haigone Kuvhurwa Nekuti Kune Matambudziko Nezviri Mukati
Ruzivo rwakadzama nezve "Iyo Faira xxxx.docx Haigone Kuvhurwa Nekuti Kune Matambudziko Nezviri Mukati" Kanganiso
Kana uchivhura gwaro reIzwi rakakanganiswa neMicrosoft Word 2007 kana yepamusoro shanduro, iwe unoona inotevera meseji yekukanganisa:
Iyo faira xxx.docx haigone kuvhurwa nekuti pane matambudziko nezviri mukati.
(Nhoroondo: Iyo faira yakaora uye haigone kuvhurwa.)
iko 'xxx.docx' iri iro gwaro reWord rakaora.
Dzvanya bhatani "OK", iwe uchaona yechipiri mhosho meseji:
Izwi rakawanikwa zvisingaverengeke zvemukati mu xxx.docx. Iwe unoda kudzoreredza zviri mukati megwaro iri? Kana iwe uchivimba nekwakabva gwaro iri, tinya Yes.
Dzvanya bhatani "Hongu" kuti Shoko ridzokere gwaro.
Kana Shoko rakatadza kugadzirisa iro gwaro rakaora, iwe uchaona yechitatu yekukanganisa meseji. Icho chikonzero chakadzama chinosiyana zvinoenderana nemamiriro akasiyana ehuori, semuenzaniso:
(Nhoroondo: Microsoft Office haigone kuvhura iyi faira nekuti zvimwe zvikamu hazvipo kana kuti hazvishande.)
Pazasi pane muyenzaniso screenshots yemakanganiso mameseji:
Dzvanya bhatani "OK" kuvhara bhokisi remashoko.
Kana zvimwe zvikamu zveGwaro gwaro zvikaora, iwe unowana iwo ataurwa pamusoro apa mhosho mameseji. Uye kana huwori hwakanyanya uye Shoko risingakwanise kuridzorera, unogona kushandisa chigadzirwa DataNumen Word Repair kugadzirisa iro gwaro reIzwi uye kugadzirisa iyi kukanganisa.
Dzimwe nguva Shoko rinokwanisa kudzoreredza zvinyorwa mukati megwaro rakaora, asi mimwe mifananidzo haigone kuwanikwa. Mumamiriro ezvinhu akadaro, unogona zvakare kushandisa DataNumen Word Repair kudzoreredza iyo mifananidzo.
Muenzaniso faira rakashata reGwaro faira Faira rakadzorerwa ne DataNumen Word Repair